Ergothioneine inongoerekana yaitika amino acid uye iri thiourea inowana histidine, ine sulfuri atomu pa …… ..
APane l ergothioneine poda yakashandisa mune hutano hunowedzera
Ergothioneine inongoerekana yaitika amino acid uye iri thiourea inowana histidine, ine sulfuri atomu pane imidazole mhete. Iyi komponi inogadzirwa mune zvisikwa zvishoma zvisikwa, kunyanya Actinobacteria, Cyanobacteria, uye zvimwe fungi. Ergothioneine inoda yakananga transporter, EGT, inozivikanwawo seOCTN1 (gene chiratidzo SLC22A4), kupinda mumasero. Kutaura kweEGT kwakasimbiswa mumitsetse yemasero emunhu uye mhuka uye kugona kwayo mukufambisa ergothioneine kwakasimbiswa mu vivo.
Vanhu vanotora ergothioneine yekukuvara kwechiropa, katoni, chirwere cheAlzheimer, chirwere cheshuga, uye chirwere chemwoyo.
Kana yasanganiswa ne hyaluronic acid, glucosamine, collagen, yakaratidzirwa kuderedza zvakanyanya kurwadziwa pamwe nekuwedzera kusimuka kwekubatana, kwakabatana nehunhu husina kunaka hwekuita shure, mushure mekushandisa kwevhiki shanu chete.
Kunyangwe l-ergothioneine ichigovana zita uye inogona kubva kune ergot fungus, haina chepfu munzira chero ipi zvayo.
Tsvagudzo inoratidza kuti EGT antioxidant inogona kuita senge anti-kuzvidzora kuti iwedzere kuchengetedza masero kubva pakurwara nezvirwere zvemuviri.
Tsvagiridzo inoratidza kuti seantioxidant, EGT inogona kudzivirira kubva kuzvimba.
Zvinogoneka kuti EGT inogona kuderedza kuzvimba mune varwere vane rheumatoid arthritis.
Se cytoprotectant, EGT chiitiko chakakurumbira pakati pevarwere veAlzheimer's neParkinson.
EGT inotsigira muviri wako zvakasikwa antioxidant yekudzivirira system uye inogona kuchengetedza maseru ehuropi kubva ku-oxidative kukuvara uye kusagadzikana kubva kune mahara radicals.
Nekuda kwayo cytoprotectant uye antioxidant inogona, EGT inodiwa amino acid mune varwere vane chirwere chechiropa.
Iwe unowanzo kuwana EGT mune akawanda skincare zvigadzirwa nekuda kwayo cytoprotectant uye antioxidant zvinhu- izvo zvinogona kudzivirira ganda ganda kubva ku-oxidative kukuvara.
EFSA Panel pane Dietetic Zvigadzirwa, Nutrition uye Allergies (2017). "Chirevo pamusoro pekuchengetedzwa kwekugadzira l-ergothioneine sechinhu chazvino chikafu - chakawedzerwa chekudya nekuchengetedza kuchengetedzwa kwevacheche nevana vadiki, vakadzi vane pamuviri uye vanoyamwisa". EFSA Journal. 15 (11): 5060. Doi: 10.2903 / j.efsa.2017.5060.